Ogige ntụrụndụ na ọdịdị dị na Colombian Amazon | Njem zuru oke
Ihe dị ka 50% nke ókèala nke Colombia o bu oke ohia juru na ya. Ọ bụ Colombia na-azụ ahịa Amazon, emi odude ke edem usụk n̄kann̄kụk idụt oro. Osisi ya na umu anumanu bu ihe ndi ozo bara uba nke meworo ka mba ahu buru otu n'ime ebe ndi ozo di na mbara ala.
Iji chebe nketa a, gọọmentị dị iche iche nke mba ahụ emepụtala ọtụtụ ogige ntụrụndụ na nchekwa okike nke nyeworo aka ichekwa akụ na ụba nke Colombia na-azụ ahịa Amazon, kamakwa mmetụta ọdịbendị ya, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ụmụ amaala ka bi n'ógbè a.
Amazon bụ otu n’ime mpaghara isii dị na Colombia. N'aka nke ya, nke a bụ akụkụ nke ọtụtụ sara mbara eke mgbagwoju, na Amazon, nke gbasara mba ndị ọzọ dị na South America dịka Brazil, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, Peru na Bolivia.
N'ihe kariri 480.000 square kilomita nke ndọtị, ọ dịkarịa ala karịa 40% nke ngụkọta elu nke mba ahụ. Ma ọ bụ mpaghara kacha nta nke Colombia, mpaghara nke ụmụ mmadụ na-enwebeghị ike ịbanye na ya.
E nwere ogige iri na abụọ na agwa okike dị na Colombia Colombian Amazon. Ndị a bụ ihe ndị kachasị mkpa:
1 Ogige Ntụrụndụ La Paya
2 Ogige Eke Amacayacu
3 Ogige Ntụrụndụ Cahuinarí
Ogige Ntụrụndụ La Paya
Site n'ụgbọ mmiri n'okporo ụzọ mmiri nke La Paya National Park
Ọ dị na ngalaba Putumayo ma nwee mpaghara hekta 422.000. A na-atụle ya Mpaghara nwere ụdị anụmanụ dị iche iche n'ụwa, nke nwere ọtụtụ narị ụdị anụmanụ ndị na-enye ara, ihe dị ka ụdị nnụnụ iri na ise na ihe karịrị ụdị ahụhụ iri.
O nweghi ihe dicha ncha bu ahihia ya, nke osisi di iche-iche nke okpueze ya di elu. Na Ogige Ntụrụndụ La Paya Ọ na-enyekwa akụkụ ndị mara mma na ntanetị dị mgbagwoju anya nke osimiri, ọdọ mmiri na ọdọ mmiri ndị nwere ike ịbanye ebe ha bi. anacondas na agụ iyi ojii.
Ogige Eke Amacayacu
Pink dolphin, "kpakpando" nke Amacayacu Natural Park
Ogige a dị n'ime ihe nwere ike ịbụ nke kacha dịpụrụ adịpụ na nke a na-enweghị ike ịbanye na Colombia, mpaghara oké ọhịa ebe etinyere ókèala mba a na nke agbata obi Brazil.
Tinyere ihe ndị ọzọ, Ogige Eke Amacayacu sitere na ama ihe di iche na akuku di iche na osimiri ya: na pink dolphin. Ọtụtụ ndị njem nleta na-abanye n'ime obi oke ohia nke colobian ka ha nwee ike ịtụgharị uche na mmiri a pụrụ iche na-enye mmiri n'ụwa site na nyiwe a hụrụ.
Na mgbakwunye na dolphin pink, ogige a bi karịrị ụdị nnụnụ 500 na ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke mmiri mmiri azụ. Ọ bụkwa ebe obibi jaguars, otters na manatees. Na nke ọtụtụ enwe enwere ike ileta na Agwaetiti Mocagua, ama ama na okooko osisi lotus.
Ogige Ntụrụndụ Cahuinarí
Ọ nwere mpaghara nke hectare 575.500 ma dị na ngalaba nke Amazonas. Nnukwu ụdị osisi na-eto ebe ahụ nwere ihe karịrị mita 40 n'ịdị elu. Na Cahuinarí National Park ụfọdụ osimiri kachasị apụta na Colombia dịka Pamá, Cahuinarí ma ọ bụ Caquetá.
Banyere ụmụ anụmanụ, ihu igwe na-ekpo ọkụ nke ogige ahụ na-akwado mmepe nke ụmụ ahụhụ na anụ na-akpụ akpụ. Ọ bụ ókèala nke boas na anacondas. Speciesdị ndị ọzọ na-anọchite anya ha bụ jaguar na, n’osimiri na n’osimiri, ihe egwu piranha. Ogige ahụ bụkwa ebe obibi maka ọtụtụ ụmụ amaala obodo agbụrụ Bora-Miraña.
Mpaghara Nunak nwere oke osimiri
Ebe nchekwa a dị na ngalaba Guaviare. Ọ nwere akụkụ atọ na oke ya site na osimiri Inírida n'ebe ugwu, osimiri Bocatí, Aceite na Papunaua dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, na osimiri Guacarú na Inírida n'akụkụ ọdịda anyanwụ.
N'akụkụ nke ọzọ nke Inírida bụ ndị Puinaway Natural Park, nke nwere ihe karịrị hectare hekta nke ọhịa savanna na mmiri ozuzo nke Amazon, kpọmkwem n’ókè Colombia na Brazil.
A na-eme atụmatụ na ihe dị ka puku ụmụ amaala abụọ bi, na-agbaso ụzọ ndụ ọdịnala ha, n'ime oke nke ndị Nukak National Nature Reserve. Ọ bụ ihe gbasara Agbụrụ Maku, naanị otu ụmụ amaala nọ na Colombia nke ka na-adịgide ndụ site na iji ihe ndị sitere n'okike na transhumance eme ihe site na oke mmiri ozuzo Amazon.
Na mgbakwunye na ndị a nnukwu ogige, ke Colombian Amazon anyị ga-pụta ìhè fabulous na obi ụtọ ebe ndị dị otú ahụ dị ka Sierra de Chiribequete Natural Park, ebe ụfọdụ tepuis na-ebili, na Río Puré National Natural Park. Nnukwu ogige, ebe obibi anụ ọhịa dị na ndịda Cahuinarí, ma ọ bụ Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi National Natural Park, otu n’ime mpaghara ikpeazụ echedoro ka emepụtara n’ime Sistemụ National Parks nke Colombia. Ọ bụ n'ụlọ na-erughị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nnụnụ niile dị na mba ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ogige ntụrụndụ na ọdịdị dị na Colombian Amazon
Francisco José de Paula Santander, "nwoke nke iwu"